Kukiyadaha CBD, Muffins iyo Buskud Fasaxyada • Daawooyinka Inc.eu
CBD cookies, muffins iyo buskudka fasaxa
Fasaxyada ayaa soo socda mar labaad. Saint Nicholas ayaa hadda ka dhoofay dalka, waxay ahayd xirmo habeenkii ah sidaa darteed waxaan durba raadineynaa xaalad aad u weyn oo ah geedka kirismaska ​​ee summada leh. Dabcan, bisha Diseembar sidoo kale waa xilligii lagu fadhiyi lahaa si dabacsan meesha dabka lagu shito. Waqti lagu nasto oo dib loo eego sanadka 2019. Runtii waad kufiirinkartaa CBD-edibles laga bilaabo Cannabis Bakehouse.
“Marka ugu horeysa Cannabis Bakehouse ee Yurub, qaar badan oo soo socda”, ayuu ku faanaa Shai Ramsahai bartiisa Instagram. Shai waa wiilka milyaneerka abuurka Cannabiska Boy Ramasai, oo ah milkiilaha shirkadda Royaal Queen Seeds, oo ka mid ah kuwa ugu waaweyn ee sharci dajiya xashiishadda Nederland.
Markaad eegto degelkan 'wax lagu dubo CBD' waxaad ka heli doontaa cunno badan oo kala duwan. Tusaale ahaan bunniyo, moofo, buskud, kafee, cbd malab iyo shukulaato. Ma lagu nastaa ciidaha mise bilow wanaagsan sanadka cusub? Booqo booqashada dukaanka Amsterdam ama ka dalbo via webshop.
Qiimaha lacagta Albaniga waxaa lagu wadaa lacag daroogo
Heerka sarifka ee daadashada, lacagta Albania, aad ayey uga sarreysaa ...
Ka iibso saliida CBD internetka? Waa inaad fiiro gaar ah siisaa tan
Iibsiga saliidda CBD-da ee tayada sare leh khadka tooska ah way ku adkaan kartaa macaamilka. Waxaa jira bixiyeyaal badan iyo ...
Sidee Israel u noqotay hogaamiyaha caalamiga ah ee cilmibaarista cannabis
Baarayaasha Israa’iil ayaa tobanaan sano baaraya sahaminta ku-meel-gaadhka ah faa'iidooyinka aan dhammaadka lahayn ee geedka cannabis -